Ubuntu သည် Desktop ကို HUD ဖြင့်ပြောင်းလဲရန်ကြိုးစားသည် Linux မှ
Ubuntu သည် Desktop ကို HUD ဖြင့်ပြောင်းလဲရန်ကြိုးစားသည်
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင်, ဖြန့်ဝေ, GNU / Linux များ, NOTICIAS
ငါသတင်းကိုဖတ်တဲ့အခါငါဝန်ခံ HUD (Head-Up မျက်နှာပြင်) ငါကသူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုနားမလည်ခဲ့ဘူး၊ အဲဒါကသုံးစွဲသူများကိုထွက်ပြေးစေမဲ့နောက်ထပ်ရယ်စရာကောင်းတဲ့အကြံတစ်ခုလို့ငါထင်ခဲ့တယ် Ubuntu ကိုနှင့်အတူဖြစ်ပျက်အဖြစ် စည်းလုံးညီညွတ်ရေး။ ငါထင်သည်အထိ ဗီဒီယိုကြည့်လိုက်တယ် ဒီနည်းပညာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရှင်းပြချက်နဲ့အတူ။
အခြေခံအားဖြင့်ဘာလဲ HUD လုပ်မည် (အခြားအရာများထဲမှ)၊ ၎င်းသည်လျှောက်လွှာမီနူးများကိုအစားထိုးမည်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရယူလိုသော option ကိုရိုးရှင်းစွာရိုက်နှိပ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အား၎င်းတို့ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာ၊ ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာ၊ စာမျက်နှာများဖွင့်ခြင်း၊ အမှတ်အသားပြုခြင်း (သို့) အီးမေးလ်စသည့်အခြားအပလီကေးရှင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့အပြည့်အဝကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ HUD.
သင်လုပ်ရမှာကသော့ကိုနှိပ်ပါ [TAB] y HUD လွှတ်လိမ့်မည် ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်“ ငါတို့လုပ်ချင်သောအရာ” ကိုရေးသည် HUD အလိုအလျောက်ပြီးသွားလိမ့်မယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောဖြစ်နိုင်သည့်ရွေးချယ်မှုများကိုပြသပါမည်၊ ကျွန်ုပ်တို့မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသည် [ရိုက်ထည့်ပါ] နှင့်Voilá !!!
ဒါပေမယ့်ဒါတင်မက HUD သည်အသုံးပြုသူ၏အကြိုက်များကိုလေ့လာနိုင်လိမ့်မည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးသောရလဒ်များကို ဦး စားပေးနိုင်ရန်လွန်ခဲ့သောရက် ၃၀ အတွင်းကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သမျှကိုမှတ်တမ်းတင်သည်။
ဒါဟာတကယ်ကိုငါအောင်မြင်ပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ငါပြောခဲ့တဲ့အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အယူအဆဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးသားဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းယခုငါပြalreadyနာတစ်ခုသာကြည့်ပါ အဆိုပါဖိုရမ်များအတွက် မီနူးရွေးစရာများကိုကျွန်ုပ်တို့မသိလျှင်ကော။ လျှောက်လွှာ menu ကိုပြသရန် keyboard shortcut ကို သုံး၍ တစ်ခုခုလုပ်သင့်သည်ဆိုပါစို့။ ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုရဖို့ကျွန်တော်ထပ်ထည့်တယ်၊ HUD မင်းငါ့ကိုသံသယဖြစ်တဲ့စနစ်အကြောင်းအချက်အလက်အများကြီးစုဆောင်းဖို့လိုတယ် စည်းလုံးညီညွတ်ရေး လေးလံနေခြင်းကိုရပ်တန့်ပါ။
အခြားသူများကလျှင်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ပါလိမ့်မယ် ပတ်ဝန်းကျင် သူတို့ကဒီအယူအဆကိုယူပြီးသူတို့ကိုအတူတူလုပ်ဖို့ခွင့်ပြု application တစ်ခုဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။ ငါလျှင်မသိရပေမယ့် E17 သို့မဟုတ်အလားတူပြတင်းပေါက်မန်နေဂျာဒီ option ရှိသည်။ ကျန်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ငါတို့အခုထိအသုံးပြုခဲ့တဲ့နည်းလမ်းကိုတော်လှန်ပုန်ကန်လိမ့်မယ်ဆိုတာဟာစိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုလို့ထင်ပါတယ် စားပွဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင် » Ubuntu သည် Desktop ကို HUD ဖြင့်ပြောင်းလဲရန်ကြိုးစားသည်
48 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ငါစမ်းသပ်ခဲ့သမျှ E17 မှာဒီ option မရှိဘူး။
ယခုအချိန်တွင်၎င်းသည်ငါ့ကိုမခေါ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်အတွက်၎င်းသည်လုပ်ဆောင်မှုနှင့်မြန်နှုန်းကိုဆုံးရှုံးခြင်းကိုဆိုလိုသည်၊ ၎င်းသည် touch ထုတ်ကုန်များအတွက်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောအယူအဆတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် desktop ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်မဟုတ်ပါ။
ငါပြောခဲ့သလိုပဲ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့မှာရှိသည့်ရွေးချယ်စရာများနှင့်မည်မျှအလုပ်လုပ်နိုင်ကြောင်းကြည့်ရှုရန်ရင့်ကျက်သည်အထိစောင့်ရမည်။ အနည်းဆုံးဗွီဒီယိုထဲမှာတွေ့ရတဲ့အရာကအရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။
HUD သည်ရွေးချယ်နိုင်လိမ့်မည်၊ ဂန္ထဝင်မီနူးသည်အမြဲတမ်းရရှိနိုင်လိမ့်မည်
သင်မှန်ပါသည်၊ ဤအချက်ကိုရှင်းလင်းရမည်။ ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လူများသည် Canonical ၏နည်းလမ်းများကို xDDDD ချမှတ်ရန်ရှိသည်ဟုထင်မြင်ကြသည်။
ထို့ကြောင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီနူးနှင့် HUD အတူတကွယှဉ်တွဲနေထိုင်ပါက (အနည်းဆုံး ၁၂.၀၄ တွင်၊ ကျွန်ုပ်မည်မျှပိုများသည်ကိုမသိပါ) အားလုံးသည်အားသာချက်များဖြစ်သည်။ လက်ရှိလုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုမဆုံးရှုံးနိုင်ပါ။ ရှုပ်ထွေးသော application ကိုကောင်းစွာသုံးတတ်ရန် (GIMP (သို့) Inkscape စတိုင်) တွင်အလွန်အသုံးဝင်သောသူများအနေဖြင့် ၄ င်းတို့၏အမြန်နှုန်းကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ခွင့်ပြုရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
အတိုချုပ်ပြောရရင်ငါမြင်တဲ့အတိုင်းကြည့်ရတာအရမ်းကောင်းတဲ့အတွေးပဲ။ ဒီလိုတိုးတက်မှုတွေနဲ့အတူ GNOME3တိုးတက်မှု၊ ရွေးချယ်စရာများပိုမိုများပြားလာခြင်း၊ ပိုလန်ပြီးပိုမြန်တဲ့ Unity နှင့် ၅ နှစ် LTS တို့အတွက်တိုးတက်မှုနှင့်အတူ Ubuntu ၏နောက်ထွက်ရှိမှုသည်တကယ့်ကိုအံ့အားသင့်စရာပါ။
Man elva ဟောင်းသည် Picajo $ o ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့်စတင်အစပြုခဲ့သောကြောင့်၎င်းသည် Ubuntoso နည်းနည်းသာဖြစ်သည်
ငါမှားနေတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် GIMP (သို့) Inkscape တို့လို application တွေမှာတစ်ယောက်ယောက်က "အလုပ်မှာသွက်လက်မြန်စေတယ်" လို့ငါသံသယဝင်တယ်။ ဤရွေ့ကား application များမှာလက်များသည်မောက်စ် (သို့မဟုတ်ဒီဇိုင်နာများအသုံးပြုသောအခြားစက်ကိရိယာ) ရှိသည့်အခါ၎င်းနှင့်အတူလက်ဖြင့်ကီးဘုတ်ပြောင်းရန်လည်းလိုအပ်သည်။
အခြေခံအားဖြင့် HUD (အခြားအရာများ) တွင်မည်သည့်အရာကလုပ်လိမ့်မည်ဆိုသည်မှာ application menus များအစားထိုးခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရယူလိုသော option ကိုရိုးရှင်းစွာရိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အား၎င်းတို့ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပြုရန်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်မီးမောင်းထိုးခြင်း (သို့) quicksilver ဟုဆိုလိုပါက၎င်းတို့သည်အတူတူမဟုတ်ပါ။ အခြား application တစ်ခုဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်သိလိုပါလိမ့်မည်။
ငါ Spotlight ကိုရည်ညွှန်းနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကိုကြည့်ပြီးပြီဒီထဲကိုအများကြီးမသွားဘူး
ကံမကောင်းစွာမီးမောင်းထိုးပြ XD သာ။ ကောင်း၏
Canonical ကိုဂရုစိုက်ပါ။ Apple ကမူပိုင်ခွင့်ပြီးပြီ။
box ထဲက out, ငါ screen space ကိုချဲ့ထွင်သမျှအရာအားလုံးကိုကြိုက်တယ်, ပိုကောင်းတဲ့ဖြတ်လမ်းနှင့်အတူ activated လျှင်
ငါအဲဒါကိုအသုံးမ ၀ င်ဘူးလို့မပြောရင်၊ ငါကိုယ်တိုင် Mac အတွက်အဲဒါကိုအများကြီးသုံးပြီးဖြစ်ပေမဲ့အဲဒါကိုသမိုင်းရဲ့အကောင်းဆုံးဆန်းသစ်တီထွင်မှုလို့မပြဘူးဆိုရင်
၎င်းသည် Linux desktop တွင်တီထွင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး KRunner နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ MAC မှာရှိ၊ မရှိ၊ အထူးသဖြင့် Canonical မှလာလျှင်တစ်စုံတစ် ဦး ကစျေးကွက်တွင်တစ်ခုခုဖွင့်သည့်အခါတိုင်း၊ သင် "Mac ၌ရှိနှင့်ပြီ" ဟုသင်ကိုယ်တိုင်ဖတ်ပါ။
MAC သည် Windows ထက်ဟောင်းသည်သို့မဟုတ်ပိုဟောင်းသည်။ ၎င်းသည်အခြားနည်းလမ်း ၂ ခုသာရှိသည်၊ သို့မဟုတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုသို့ကူးယူထားသည်။
သို့သော်သင်၏အတွေးအမြင်အရကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း၊ စဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်း၊ အချိန်၊ ငွေရှာခြင်းနှင့် MAC (သို့မဟုတ် windows xp) ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်သင့်သည်။
အထူးသဖြင့် Canonical မှလာလျှင်တစ်စုံတစ် ဦး ကစျေးကွက်တွင်တစ်ခုခုဖွင့်သည့်အခါတိုင်း၊ သင် "Mac ၌ရှိနှင့်ပြီ" ဟုသင်ကိုယ်တိုင်ဖတ်ပါ။
2: Canoni $ oft သည်အရာရာကိုရာစုနှစ်၏အလွန်ဆန်းသစ်သောအရာအဖြစ်ဖော်ပြပြီး၎င်းတို့အများစုသည်အခြား distros များရှိသည့်အရာများသို့မဟုတ် Mac တွင်မည်မျှကြာကြာမသိနိုင်ခြင်းအတွက်အရာများဖြစ်သည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်၏အယူအဆမှာ၊ အကယ်၍ Mac တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရာတစ်ခုရှိပြီးသားဆိုပါက၎င်းတို့သည်ကူးယူခြင်းမပြုရ။
X အရာမတိုးတက်မီ၊ သင် ဦး စွာအလားတူသို့မဟုတ်အလားတူတစ်ခုခုလုပ်ရမည်ဟုမထင်ပါလား။
HUD ဟုတ်သည်၊ Mac တွင်ရှိသည့်အရာများနှင့်ဆင်တူသဖြင့်၎င်းကိုကော်ပီတစ်ခုအဖြစ်ခေါ်နိုင်သည်။ သို့သော်အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှတိုးတက်လာလိမ့်မည်။
Nope, အစွန်းအားလုံးမကောင်းတဲ့ haha ​​ဖြစ်ကြသည်။
ရိုးရှင်းစွာအစပြုခဲ့သည့်အရာတစ်ခုခုသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်မူရင်းမဟုတ်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်မူရင်းတွင်မပါရှိသောလုပ်ဆောင်နိုင်မှု / ရွေးချယ်မှုအသစ်များကိုပေးနိုင်သည်။
Canoni $ oft သည် ၄ ​​ခုကို ၄ ခုထည့်ပြီး ၄ င်းတို့ကိုကိုယ်ပိုင်အဖြစ်ပေးခဲ့သည်။
သငျသညျ fuck ဆိုတဲ့, သင်နှင့်သဲနှစ် ဦး စလုံးဒီမှာန်းကျင်ကိုမှန်ကန် Ubuntosos တူ၏
ငါသည်သင်တို့ကိုဤ app နှင့်အတူ app launcher, ဖိုင်များ, နေရာများ, Bookmarks စသည်တို့ရှုပ်ထွေးထင်ပါတယ်။ အတူတူမဟုတ်ဘူး။
ကျွန်ုပ်ဤ application နှင့်အတူတူလုပ်ပြီးကျွန်တော်ပိတ်လိုက်သည့် YouTube ရှိ spotlight ဗီဒီယို ၁၀၀၀ ကိုပြပါ။
အခြေခံအားဖြင့် HUD (အခြားအရာများအကြား) လုပ်ဆောင်မည့်အရာသည် application menus များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ရရှိလိုသော option ကိုရိုးရှင်းစွာရိုက်ခြင်းဖြင့်၎င်းတို့အားကျွန်ုပ်တို့ကို ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ဒါကရဲရင့်၌ဒါ Spotlight ကိုပါဘူး။
အမှန်တရားကတော့ HUD မှာအရာတွေအများကြီးရှိလို့ဆောင်းပါးအရတည်ငြိမ်မှုကိုမြင်ရလိမ့်မယ် (ငါထင်တယ်) နောက်တစ်ခုက Apple ရဲ့အိုင်ဒီယာပဲ။
ဟုတ်တယ်၊ ငါ HUD ဘာလုပ်လဲဆိုတာငါသိပြီးသား။ ဒါပေမယ့်ငါ Spotlight နဲ့ဘယ်လိုလုပ်နိုင်တယ်၊ အဲဒါကိုရှာမတွေ့နိုင်တဲ့ဆောင်းပါးတစ်ခုဒါမှမဟုတ် YouTube ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုခဏရှာနေတာ။ ငါတကယ် trolling မဟုတ်ပါဘူး။ ငါထင်သည်အတိုင်းမီးမောင်းထိုးခြင်းသည် krunner သို့မဟုတ် gnome-do နှင့်ဆင်တူသည်။
ဝမ်းနည်းပါတယ်၊ ငါကဒီကိစ္စကို trolling လို့ထင်တယ်
KRunner မှာ command တွေအတွက်ကြောင့် KRunner ဟာ Spotlight နဲ့မတူဘူးလို့ထင်ပါတယ်
ငါ Mac O $ X ကိုတစ်နှစ် (သင်သိသော) ကိုသုံးပြီးကျွန်ုပ်တို့တွင်အိမ်တွင် Macbook Pro ရှိသည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ။ မင်းကိုအယုံအကြည်မရှိအောင်မဟုတ်ဘဲနောက်မှမင်းအတွက်မင်းဘာထင်သလဲဆိုတာကိုပြောပါ။
ရာစုနှစ်ရဲ့ထူးခြားဆန်းသစ်မှုအဖြစ်တင်ပြထားတဲ့ Ubuntu bullshit ကိုကျွန်တော်ပြောပြပြီးပါပြီ။ ဒီအချိန်မှာတော့ရှက်စရာထက်အိပ်ချင်နေတဲ့အတွက်ဗွီဒီယိုကိုကျွန်တော်မလိုချင်ပါဘူး
Ubuntu ကိုသင်ဝေဖန်ချင်တာကိုသာသင်ပြသခဲ့သည်။ လူသား, ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့ဓမ္မဓိively္ဌာန်ကျကျဝေဖန် .. 😀
@elav <° Linux၊ သင်က "ubuntu hater" ကိုဓမ္မဓိivity္ဌာန်ကျကျမမေးနိူင်ပါ။
Man ကအဲဒီလိုမဟုတ်ပေမယ့်အညိုရောင် distro ကိုငါမုန်းရင်တောင်မှန်တယ်
ကောင်းပြီ၊ မင်းမှတ်ချက်ကိုမင်းဘယ်လိုမြင်မလဲဆိုတာမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါပျောက်သွားတဲ့ပုံတစ်ပုံကိုဗွီဒီယိုလင့်ခ်နှစ်ခုတင်လိုက်တယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဟာကထွက်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ရွေးချယ်စရာများကိုသင်သိရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်ဘာလုပ်ချင်သည်ကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ ထို့နောက် HUD သည်ရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်းအလုပ်လုပ်သည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်ရရှိနိုင်သည့်ရွေးစရာများကိုဖယ်ရှားလိမ့်မည်။ မင်းမှာ smart search engine ရှိတယ်ဆိုပါစို့။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ကျွန်ုပ်သည် menu ရွေးချယ်စရာများနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ကူးမရှိပါကကျွန်ုပ်သည်ဂန္ဓာမီနူးများနှင့်ပင်နာရီပေါင်းများစွာ - ကျွန်ုပ်၌ရှိသကဲ့သို့ရှိသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့က optional ကိုဖြစ်စေမရှိမရှိနှင့်ပတ်သက်။ ။ Ubuntu 12.04 တွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်ဟုသင်မျှော်လင့်ပါက၊ HUD မရင့်ကျက်ခြင်းနှင့်တိကျမှုသည် LTS ဖြစ်လိမ့်မည်။ Ubuntu 12.04 မှာ menu ကိုအစားထိုးမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်လာမယ့်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတသံသရာအတွင်းကလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ အရာအားလုံးသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အသံအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်ကိုလက်ခံခြင်းစသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်အဲဒါဟာအသစ်အဆန်းတစ်ခုပါ။ သူတို့ဟာ Krunner နဲ့ Synapse လိုအခြားပရိုဂရမ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကို Canonical ရဲ့အောင်မြင်မှုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
Unity ကိုသုံးဖို့မကောင်းဘူး၊ လိုအပ်တာကငါ့ကိုပျင်းရိစေတယ်။ ဒါကြောင့်ငါသုံးမယ်လို့မထင်ဘူး၊ XFCE အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုစောင့်နေလိမ့်မယ်။
ရိုးရာမီနူး - ဘယ်ဘက်ခလုတ်၏ ၂ ခေါက်ကိုပရိုဂရမ်တစ်ခုဖွင့်ပါ။
ဒီအသစ်တီထွင်မှု: ... ?
အဓိကစကားလုံးသည်စာရိုက်ခြင်းဖြစ်သည်၊ များစွာသောသူတို့အတွက်နှစ်သိမ့်မှုသို့မဟုတ်မြန်နှုန်းနှင့်မတူညီသည် အရာအားလုံးကိုရေးသားခြင်းသည်လက်တွေ့ကျသည်ဟုဘယ်သူကပြောသနည်း။
ပညာရှင်တွေအတွက်တော့ဒီဟာကကြိုတင်မဲပေးရမယ်၊ ဒါပေမယ့်အပျော်တမ်းတွေအတွက်တော့ရှုပ်ထွေးပြီးတဲ့နောက် ubuntu လောကရဲ့နောက်ထပ်ရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုပဲ။
အရာအားလုံးကိုစာရိုက်ရတာပိုပြီးအဆင်ပြေတယ်လို့ဘယ်သူကပြောလဲ .. keyboard နဲ့ screw ပါ။ Ubuntu ကတကယ်တော့မပေးပါဘူး။ ရလဒ်မှာကျွန်ုပ်တို့အားရိုက်ထည့်ပြီး၎င်းအားကျွန်ုပ်တို့အားလိုချင်သောရလဒ်ရရှိစေရန်စောင့်ဆိုင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် "ရှာဖွေခြင်းသို့မဟုတ်ဖိုင်စီမံခန့်ခွဲခြင်းသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်ခြင်း" အပလီကေးရှင်းတွင်အဆင်ပြေသည်။ သို့သော် application အားလုံးနှင့် system ကိုယ်တိုင်ကဤကဲ့သို့သောပြုမူသည်။ စည်းလုံးမှုကကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်။
နောက်ဆုံး၌ဤအရာအားလုံးသည်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ - တက်ဘလက်များ၊ မိုဘိုင်း၊ တီဗီများ ...
အသေးစိတ်အချက်တစ်ချက် - သင်ရိုက်နှိပ်ပြီးလိုချင်သောရလဒ်ရရှိစေရန်စောင့်နေရမည်ဟုသင်ပြောသည်။ ဒါကမမှန်ပါဘူး, ဒါမှမဟုတ်အစား, ကအရည်အချင်းပြည့်မီရမည်ဖြစ်သည်။
HUD သည်သင်၏ရှာဖွေမှုနှင့်ကိုက်ညီသောစကားလုံးများအတွက် menu ကိုရှာဖွေရုံသာမက၎င်းတို့မှလည်းသင်ခန်းစာယူသည်။ ထို့ကြောင့်၊ တရားဝင်ဗီဒီယိုတွင်တွေ့ရသော Inkscape ဥပမာတွင်၊ သင် filter တစ်ခုရှာပြီးလိုက်လံကျင့်သုံးလျှင်၎င်း system မှ“ သင်ယူသည်” နှင့်နောက်တစ်ကြိမ်တွင်တူညီသော filter ကိုရှာဖွေရန်သင်စာရိုက်မည်မဟုတ်ပါ၊ သင်ထပ်မံလိုအပ်သည်ကိုလုပ်နိုင်သည်
အကယ်၍ လျှောက်လွှာတွင်အတိမ်အနက်သို့မဟုတ်ရွေးချယ်စရာများများများစားစားမရှိလျှင်သင်လုပ်ချင်သောအလုပ်ကိုရှာဖွေရန်သင်စာရိုက်စရာမလိုပါ၊ ဟုတ်သလား။ 🙂
ငါ HUD ဒီ option ကိုငါ UL မှာဖတ်ပြီးပြီဆိုတာသိလို့စိတ်သက်သာရာရတယ်။
ဟုတ်ကဲ့၊ ဟုတ်ကဲ့… .. သူတို့ကအထောက်အပံ့အသစ်တွေရဲ့ရှေ့မှောက်မှာရှိတဲ့အာရုံကြောအားလုံး (နှင့်ညာဘက်) ကိုစမ်းသပ်နေပါတယ်။
သူနဲ့ဆင်တူတာက ၀ င်းအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ Enso Launcher ပါ။ ၎င်းသည်မည်မျှထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်ကြောင်းနှင့်၎င်းအားဆွဲယူသောအခါသင်မည်မျှရရှိနိုင်ကြောင်း၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်၊ အများကြီး။
၎င်းသည် launcher တစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည် application menus များအစားထိုးခြင်းဖြစ်သည်သာမကအပိုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုမထင်ပါ။ ၎င်းသည်နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုလျင်မြန်စွာနှင့်တိကျမှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။
Ubuntu အတွက်ဒီလိုမျိုး app ကိုထုတ်ပေးလိုက်တာကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်၊ ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပါ့မယ်။
ငါ Ubuntu ကို command များရေးသားခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်စေချင်တယ်ဆိုရင်၊ graphical environment ကိုမလိုအပ်တော့ဘူး။ Ubuntu သည် Excessive Resources များကိုစားသုံးသည့် TERMINAL ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ရလဒ် = UBUNTU သည် WINDOWS VISTA အသစ်ဖြစ်သည်
Desktop များတွင် Linux ကို ၁% မှ ၁.၄၁% သို့တိုးသည်။
ဥရောပကော်မရှင် ACTA လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်